Madaxwayne muse bixi xukumadisu arimo badan ayay waxka qabatay mudadi yarayde ay talada haysay. Siyasi axmed gobonimo
Friday August 03, 2018 - 17:33:44 in Wararka by Super Admin
Tayaynti xukumada waxyabaha mesha kabaxay
Wasiradi safarada diba iyo gudahaba soconjiray oo kharash badani kubixi jiray
Shidaladi iyo lacagihi dadka qaar masuliyi tu uqorijiren
Kuwasoo masuliyinta ay isku beesha ahayen ugu hanjabi jiray xilka aad reerka. Uhayso waanu kaqadi intanu madaxtoyada tagno
Odayashi iyo siyasinti hore ee madaxtoyada mashqulinjiray tasoo mesha kabaxday madaxtoyadina noqotay meel qaranka dantisa lagu shaqeyo
Waxaa kaloo mesha kabaxay masuliyinti dowlade saxafada kawada murmi jiray waliba saxafada madaxa banan iyagoo lacago badan kubixin jiray jawabta
Qof macarida ama shaqsi cadiya oo wax kashega
Waxaa kaloo mesha kabaxay agasimihi wasirka badali jirey ee madaxtoyada kuxidhna tasoo awood buxda wasirka losiyay wasaradisa
Intasi waa inta wax laga badalay waxan soowada wixii laqabtay.
Wixii laqabtay mudada
Musuqmasuqi oo hoos udhacwayn sameyay
Bangigi dowlado laga shaqaysiyay iyadoo sixirka lacagta wakasta bangigu jaro dhirigali ta lacagtena shilinka tasoo meshu ugu ficnayd abad gadhay
Waxbarashadi oo looqorsheyay inlagu tayeyo malayin. Dolar
Sidii korlogu qadilahaa iskulada dowlada kuwa garka loleyahayna in lakantarolo sidii ay ugunaxarisanlahayen shacbigoga danyarta tasoo mel fican maraysa
Waxaa iyana dhawan dhamandona mashruci biyo baladhinta casimada oo dardar cusub xukumadani galisay tasoo dhamad kudhow shacbiguna kudirsandonan xalada biyp laaante jirta xaga kale wasarada biyaha ayaa iyana mudadi udanbaysay celal badan dalja kaqoday dhawana lasoo bandhigidona
Waxyabihi umada waxtarka ulahaa ayay xukumadu. Kudadalaysa hadana umadu waxay kacabanayan xukumada waxanay raban lacagihi masuliyintu dadka qaar jeebja ugu ridijiren.
Umadu hakala dayso xukumad fican iyo musuqmasuqu hajiro.